Radama II - Wikipedia
Radama II dia mpanjaka malagasy izay nanjaka tao amin'ny Fanjakan'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1861, taona nahafatesan-Ranavalona I reniny, ka hatramin'ny taona 1863. Tsy fantatra ny tena rainy satria efa maty iray taona mahery Radama I vadin-dreniny vao teraka izy tamin'ny taona 1829 ary tamin'ny taona 1863 no nahafatesany.
Nikasa hanangana fanjakana moderna Radama II ka namela malalaka ny fivavahana kristiana sy ny fidiran'ny vahiny teto Madagasikara. Nofoanany ny fanamelohana ho faty. Nifanerasera tamin'ny sokajin'olona izay noheverina tamin'izany fotoana izany ho ambany izy ary tsy dia niantehitra tamin'ireo andriana firy.
Tsy naharitra teo amin'ny fitondrana Radama II satria novonoin'ireo tsy faly tamin'ny fomba fitondrany izay heverin'izy ireo fa tsy firaharahana ny fomban-drazana sy ny fomba tokony hitantanana ny fanjakana. Ny mpanjakavavy Rasoherina vadiny no nandimby azy tamin'ny nahafatesany.
Radama I (1810-1828)
Ranavalona I (1828-1861)
Radama II (1861-1863)
Ranavalona II (1868-1883)
Ranavalona III (1883-1897)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Radama_II&oldid=979646"
Dernière modification le 14 Janoary 2020, à 11:25
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2020 amin'ny 11:25 ity pejy ity.